Brag Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha Mirehareha
Air Jordana no malaza. Tsy hanao azy mafy mihalehibe aza, satria ny ray aman-dreniko ahy tsy nety hividy kiraro lafo vidy ridiculously. Tsy tiako izany, fa fantatro aho fa tsy hahazo ny tanako amin'ny mpivady. Noho izany aho dia voatery hiatrika - amin'ny alalan'ny mody tsy misy. Nisy lava roa taona miezaka handresy lahatra ny tenako fa mpampiofana Reebok hazo fijaliana dia stylish. Fa tahaka ny nahazo antitra, Takatro Jordana dia sarotra ny tsy miraharaha. Ny namako rehetra nanana roa na roa, ary iray amin'ireo namako dia downright manahy be loatra momba ireo.
Rehefa fomba vaovao nivoaka, dia tsy hijanona fotsiny amin'ny an-toerana Foot Locker rehefa nanana fotoana malalaka; Dia nanao ny fiainany mahazo fa mpivady vaovao. Ary nanao antoka fantany Jordana rehetra famotsorana daty, dia ho toy izany koa mividy ny kiraro amin'ny loko isan-karazany, ary izy no matetika mandany ny asabotsy maraina nitoby avy eo anoloan'ny fivarotana kiraro. Ary nitsoka ny saina. Ary farany dia tsy maintsy nanontany ny tenako, “Inona no tena manokana mikasika ireo kiraro?! Mazava aho voa mafy tokoa.”
Namako ny mieritreritra be momba ny Jordana nanao fanambarana. Na marina na tsia, he was saying loud and…
amim-pahatsorana, Izany dia midika hoe tsy anarana fotsiny droppers izay irk antsika aza. Izany ny olona izay mirehareha amin'ny ankapobeny. Reraka isika maniry ny mandre olona mirehareha momba ny sekoly ambaratonga faharoa baolina kitra andro (tonga ny fotoana hifindra amin'ny, tompoko). Tsy sasatra ny tombontsoa namana izay mahita fomba ny bitsika momba toerana ireo vahiny rehetra mitsidika. Ary tsy manana faharetana be ho an'ny olona izay tsipiriany ho antsika rehetra izy ireo hividy zavatra lafo vidy (raha tsy ry zareo rappers, mazava ho azy). Whether it’s covertly bragging about who you…